Ebikes: Imwe nzira yekutakura yeRamangwana?
Chii chinosanganisira pfungwa dzako kana iwe uchinge wafunga nezvesainzi yakashandisazve nyika, uye mashandiro atinoita uye kugara mairi? Pamwe ipc, mota, uye kunyangwe nharembozha yakanaka. Nekudaro humwe hunyanzvi huri kubudirira chinyararire uye hunowanikwa kushandiswa kwakapararira nekuburitsa yekare ...
Tennessee State Parks yakaunza kuti Bhasikoro Chiitiko MuTennessee Yese (BRAT) ichave chiitiko chedigital iyi mwedzi gumi nemaviri yekugara zvakanaka uye kuchengetedzeka kwevatasvi nevashandi vepaki. "Chiitiko chakanaka chevatyairi vemabhasikoro mudunhu redu rese, uye chimiro chedigital chinoita kuti ...
Vaviri vagari veBordentown vanowana Mukadzi Scout Goridhe Mipiro
Hwehudiki hwekutsvaga kwakakonzera kubudirira kwevakadzi vaviri veBordentown. Alison Wall naEmily Wheeler, vanga vachinetsekana nevekwavo veMukadzi Scout mauto pamwechete kubvira kukireshi, vapedza zvirongwa zvavo zveGoridhe Mubairo, mubairo wakanakisa unokwanisika ...